कुसमाचार भेटियो ? अब अनलाइनबाटै गर्नुस् उजुरी – Media Kurakani
कुसमाचार भेटियो ? अब अनलाइनबाटै गर्नुस् उजुरी
January 21st, 2018 Media Kurakani Media News
यहाँ कुसमाचार भन्नाले पत्रकार आचारसंहिता विपरीतका समाचार वा झूठा समाचारहरूलाई भन्न खोजिएको हो।
प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले काउन्सिल कार्यालय सञ्चारग्राममा आइतबार अनलाइन उजुरी प्रणाली सुरुवात गरे।
राससका अनुसार ‘जानाजान वा अनजानमा कसैप्रति लाञ्छना लगाउने, चरित्र हत्या गर्ने, अमर्यादित व्यवहार देखाई समाचार सम्प्रेषण गर्ने सञ्चार गृहलाई कारबाहीको माग गर्दै उजुरी गर्न सजिलो भएको छ।’ तपाईँ आफ्नो परिचय खुलाएर डकुमेन्ट, फोटो, लिंक तथा म्यासेज पठाउन सक्नुहुन्छ। काउन्सिलले त्यसउपर कारबाही चलाउनेछ।
Tags Press Complaint Press Council Nepal
कान्तिपुरको सुमार्गी मोह : ओलीलाई तेस्रो पेज, पम्फालाई पहिलो ? »
« कान्तिपुर र सुमार्गी द्वन्द्वमा उपेन्द्र महतोको के हो कनेक्सन ?